काठको पोल स्थापित गर्दै हरित अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ «
काठको पोल स्थापित गर्दै हरित अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ
कार्यकारी अध्यक्ष, वन पैदावार विकास समिति
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सह–सचिव तथा वन पैदावार विकास समितिकी अध्यक्ष विन्दुकुमारी मिश्र वन विज्ञान क्याम्पस, पोखराबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने पहिलो महिला हुन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहिलो महिला अधिकृत हुँदै वन पैदावार विकास समितिको पहिलो महिला अध्यक्षका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएकी छन् मिश्र । २०४४ सालदेखि नै उनी सहायक वन अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले अस्ट्रेलियाबाट वन व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । हाल वन पैदावार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा कम छैनन्, उनीहरूमा क्षमता छ, नीतिगत तहमा पुग्ने र समाज बदल्ने भन्ने गतिलो उदाहरण दिन सफल भएकी छन् मिश्रले । वन पैदावार विकास समितिले वन पैदावार आपूर्तिमा खेलेको भूमिका, आगामी रणनीति, चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले मिश्रसँग गरेको कुराकानीको सार :
वन पैदावार विकास समितिले काठदाउरा आपूर्तिमा कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ?
यस वन पैदावार विकास समितिको स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चारवटा उद्देश्य लिएको थियो । पहिलो उद्देश्यमा, उच्च वृद्धिदर हुने वन पैदावारहरूको वृक्षारोपण गरेर वन पैदावारको उत्पादन बढाउँदै काठदाउराको आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने छ । दोस्रोमा आयोजना÷परियोजनाहरूबाट उत्पादित वन पैदावारहरूको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा बिक्री–वितरण व्यवस्था मिलाउने, तेस्रोमा आयोजना÷परियोजना क्षेत्रवरपर बसोबास गर्ने, दक्ष र अदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र छिटो बढ्ने तथा छोटो समयमा काठदाउराको उत्पादन दिन सक्ने प्रजातिका उन्नत र स्तरीय बिरुवा उत्पादन गरी सहुलियत दरमा बिक्री–वितरणको माध्यमबाट निजी जग्गामा वन प्रवद्र्धनका लागि टेवा पु¥याउने भन्ने छ ।
हामीले छिटो बढ्ने बिरुवा रोप्ने, काट्ने, तुरुन्त आपूर्ति गर्ने, परियोजनाको क्षेत्रभित्र र क्षेत्रबाहिर परियोजनाको निजी जग्गा धनीहरूलाई राम्रो खालको बिरुवा रोप्न दिएर आपूर्ति बढाउने भन्ने हो । विगतको इतिहास हेर्दा यस समितिअन्तर्गतका सागरनाथ र रतुवामाई वन विकास परियोजनाबाट करिब अढाइ लाख क्युफिट वार्षिक काठ आपूर्ति भएको देखिन्छ ।
मागअनुसारको वन पैदावारको आपूर्ति त हुन सकिरहेको छैन नि त ?
दुई ठाउँमा मात्रै समितिको उत्पादन गर्ने आयोजना÷परियोजना छ । सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लास्थित सागरनाथ वन परियोजना छ, जहाँ १३ हजार ५ सय ५२ हेक्टर मात्रै आयोजनाले काम गरेको हुन्छ । झापामा रतुमाई आयोजना छ, जहाँ करिब २७ सय हेक्टरमा मात्रै काम गरेको हुन्छ । यी दुई ठाउँलाई लिएर हाम्रो राष्ट्रियस्तरको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रसँग जाँच्न त मिल्दैन । किनकि यो सानो युनिट हो ।
तर जति क्षेत्र छ नि, समितिअन्तर्गत उत्पादन गर्ने क्षेत्र त्यसका आधारमा चाहिँ राम्रै उत्पादन गरेको देखिन्छ । वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको आयोजना÷परियोजना पहिलाचाहिँ तीन ठाउँमा थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुमाई र नेपालगन्जमा पनि थियो, जसमध्ये नेपालगन्ज अहिले बन्द भइसकेको छ । नेपालगन्जको चाहिँ नेपाली सेनालाई हस्ताक्षर गरिसकिएको छ ।
यो समितिका गतिविधि ओझेलमै छन्, यहाँहरूले काम गर्न नसकेर हो या गरेका काम बाहिर आउन नसकेर हो ?
नेपाल सरकारले वृक्षारोपण गरेर पनि काठदाउराको आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर राखेका एकमात्रै वृक्षारोपण आयोजना हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिको २०३३ मा गठन भएको हो । सुरुमा एसियाली विकास समितिको ऋण सहयोगबाट यो सुरु भएको थियो । २०३५ देखि २०४० सम्म एडीबीको सहयोग, त्यसपछिको ओपेट फन्ड, फेरि २०४९ देखि २०५३ सम्म एडीबीकै लोन, २०५३ देखि २०५८ सम्म नेपाल सरकारकै अनुदानबाट यो परियोजना चलिरहेको थियो । अहिले यी दुई परियोजनाले आफैं खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आफैं बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने, काट्ने, बेच्ने गरेर अफिसको सबै खर्च पनि त्यहींबाट व्यवस्थापन गरेको छ । यो अरूभन्दा फरक छ ।
राज्यलाई कति आम्दानी दिएको छ ?
सामुदायिक वनहरूमा जुन वन क्षेत्र सरकारले दिएको छ, त्यहाँबाट सरकारले खासै आम्दानी पाउन सकेको छैन । सबै आम्दानी समूहको खातामा जान्छ । अहिले पनि वन पैदावार विकास समितिले राज्यलाई पूरा राजस्व दिएको छ । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले भन्दा पनि बढी मूल्य राखेर वन पैदावार बिक्री गर्छ ।
प्रतिस्पर्धामा जाने भएकाले बढी मूल्यमा पनि बिक्री भएको छ । आपूर्तिको अवस्था कमजोर छ भन्ने त प्रस्ट हुन्छ नि त । किनकि बढी मूल्य राख्दा पनि बिक्री त भइरहेको छ । हामी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्छौं, तर प्रतिस्पर्धामा जहिले पनि बढेर नै आएको छ ।
अहिले जुन अधिकतम मूल्य हामीले पाउँछौं, फेरि अर्को वर्ष त्यसैलाई न्यूनतम मूल्य राखेर हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँछांै । अहिले काठमा राजस्व १ हजार छ भने डिभिजन वन कार्यालयहरूले १ हजार न्यूनतम मूल्य राखेर बेच्नुहुन्छ । तर, समितिले सालको काठको न्यूनतम मूल्य २२ सय राख्छ ।
यसो गर्दा झन् उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्दैनन् र ?
बिक्री नै हुँदैनथ्यो । गत वर्ष हामीले जति मूल्यमा बेच्यौं त्योभन्दा धेरै मूल्य पाउँछौं भन्ने भयो । हामीले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्दाचाहिँ थोरै मूल्य लिएका हुन्छौं । तर, प्रतिस्पर्धाबाट जाँदा बढी मूल्य लिने हो । काठ व्यवसायीहरू बढी मूल्य तिर्न राजी हुन्छन् ।
तर, बजारसम्म काठ आइपुग्दा झन् ६ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्छ नि त ?
हामीले गोलिया काठको मूल्य भनेका हौं । त्यो चिरेर बजारसम्म पुग्दा त्यहाँ बिचौलिया र प्रोसेसिङ मूल्य, चिरान गर्दा पूर्ण कस्ट त आउँदैन नि त । थोरै आउँछ । बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन नि । काठमाडौंसम्म आइपुग्दा महँगो मूल्यमा उपभोक्ताले काठ किन्नुपरेको छ । हामी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट नै बिक्री वितरण गरिरहेका हुन्छौं ।
सागरनाथ वन परियोजना लगाइएको मसला प्रजातिको बिरुवाले त पानीको स्रोत सुकाएर कैयौं किसानको खेत नै बाँझो भयो भन्ने गुनासाहरू बढिरहेको छ नि त ?
हामीकहाँ त्यो गुनासो त आइपुगेको छैन । मसला आफैंमा छिटो बढ्ने प्रजाति हो । यो अस्ट्रेलियाको प्रजाति हो । अन्य प्रजाति र छिटो बढ्ने प्रजातिहरूसँग तुलना गर्दा अधिकांश छिटो बढ्ने बिरुवाले पानी बढी खान्छ । किनकि छिटो बढ्नका लागि पानी धेरै चाहिन्छ । जनताले भन्नुभएको कुराहरूको आधारमा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै यथार्थ के हो भन्न सकिन्छ ।
अनुसन्धानको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र छ । त्यहींबाट अनुसन्धानका कामहरू गर्नुहुन्छ ।
मसलाको बिरुवा त विद्युतीय पोलको काठमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यले रोपिएको भन्ने छ, तर पोलको काठ विस्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था छ नि ?
पछिल्लो समयमा हामीले करिब ५ हजारदेखि ७ हजारवटा पोलको काठ मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छौं । मसला कडा काठ भएकाले कडा काठ प्रयोग हुन्छ । भेनियर कम्पनीले लाने गरेका छन् । सुरुमा दाउरा पोलका लागि थियो भने अहिले भेनियरमा यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।
मसलाको काठलाई ट्रिटमेन्ट गरेर फलामे पोलभन्दा बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने पनि छ, त्यो किन नगर्ने त ?
वन निगमले ट्रिटमेन्ट गर्ने प्लान्ट स्थापना गरेको छ । बीचमा त्यो बन्द भएको थियो । यो अफिस त गत वर्ष वन निगममा समाहित भएको थियो । फेरि छुट्टिएर आएको छ । वन निगमसँग कुरा गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई संशोधित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । प्रक्रियामा छौं । फलामे पोलको ठाउँमा काठको पोल स्थापित गर्ने योजना छ । त्यसो हुँदा हरित अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सक्छौं ।
समन्वयको अभाव देखिएको हो ?
तत्काल राष्ट्रियस्तरको जुन प्रावधानले उत्पन्न गराएको समस्या हो । वन पैदावार विकास समितिलाई वन निगमसँग जोडेर एउटै कार्यालय बनाइयो । उजुरीपछि २०७६ भदौमा सर्वोच्चबाट विकास समितिलाई पुनः कायम गरेर वन निगमबाट हटाउने निर्णय भयो । तर, अदालतबाट क्याबिनेट गएर छुट्टै अस्तित्वमा आउनका लागि करिब ११ महिना लाग्यो । फेरि पुरानै अवस्था आइपुगेको छ । प्रदेश २ मा भएको परियोजना प्रदेशअन्तर्गत व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा परेको छ । निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन नै छ । जब सर्वोच्चमा विचाराधीन हुन्छ, पूरा रूपमा त्यहाँ काम गर्नचाहिँ अप्ठेरो हुन्छ । आफ्ना किसिमले कर्मचारी आपूर्तिदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरू स्थापित गर्नका लागि भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन । प्रदेशका तर्फबाट प्रारम्भ गर्दा भोलि प्रदेश र संघको अधिकार क्षेत्रमै विवाद पनि छ । यो त अरूको क्षेत्राधिकारभित्र जाने चिज पो हो कि केही समय रौकौं न भन्ने मनसाय पनि हुनसक्छ । अहिले संघबाट विगतमा २ करोड प्रत्येक वर्ष अनुदान जाने गथ्र्यो, तर अहिले प्राप्त गरेको छैन । अनुदान नै रोकिएको छ । के करण हो, यकिन भन्ने त थाहा छैन ।
तलब खान पाएन भन्ने गुनासो बढेको अनुदान नगएर हो त ?
अनुदानबाट पहिला पनि तलब खाने गरिएको थिएन । ११ महिना विचाराधीन रह्यो । आफ्नोअनुसार पनि काम गर्न सकिएन । निगमसँगको मुद्दाले गर्दा अप्ठेरो भएकाले काठ कटान र बिक्री हुन नसक्दा कोषमा पैसा भएन । अनि तलब खुवाउन सकिएन । अहिले पुनः छुट्टै समितिका रूपमा फेरि स्थापित भएदेखि करिब २० करोडको काठ बिक्री भएको छ । अहिले भने तलब रोकिएको छैन । विवाद समाधान भएपछि अहिले काठ काट्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । करिब १ लाख ३० हजार क्युफिट हामी टिक काट्दै छौं । मसला काटिसकेका छौं । कति काट्यौं, डाटा संकलनको क्रममा छौं । गत वर्ष विवादहरूले गर्दा र कोरोनाका कारण फिल्ड स्तरमा राम्रो काम गर्न सकेनौं । गत वर्षको आम्दानी १ करोडमात्रै थियो भने अहिले हामीले २० करोड गरिसकेका छौं । यसले गर्दा तलब खान पुगेको छ । विकास–निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारबाट १ करोड अनुदान पाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अर्थमा सहमतिका लागि पठाएका छौं । प्रक्रियाले अलिकति ढिलाइचाहिँ हुने रहेछ ।
उत्पादन भएका काठ–दाउरा बिक्री नहुने भन्नेचाहिँ भएको छ कि छैन ?
यस वर्षको कुरा गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको विवादका कारण काठदाउरा संकलन तथा बिक्री–वितरण रोकिएको थियो । असहज भएको छ । यसले गर्दा बिक्री गर्न सहजता पैदा भयो । कमसल काठ पनि यो पालि राम्रै मूल्यमा बिक्री भएको छ । केही पुराना काठदाउरा विगतदेखि घामपानीबाट बिगँ्रदै गएको थियो, त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर लिलाम गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
यहाँहरूका दुवै परियोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिल्भिकल्चर प्रणालीअन्तर्गत भएर पनि किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ?
यो दुवै परियोजना वन मन्त्रालयले वृक्षारोपण गरेर हामी कति गर्न सक्छौं भनेर देखाउन राष्ट्रियस्तरमा सुरु गरेको छ । यी परियोजनाहरूमा म विद्यार्थी हुँदा पनि बिरुवा उमार्ने, रोप्ने र गोड्ने अभ्यास गराइन्थ्यो । यसलाई राम्रो व्यवस्थापन मानिन्थ्यो । स्रोतको कमीले गर्दा पहिला जस्तो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । तर पनि वन पैदावार त्यहीं उत्पादन गरेर २ लाख रोजगारी वार्षिक हुन्छ । २ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । १ सय ७० दैनिक ज्यालादारका रूपमा चौकीदारहरू छन् । कर्मचारी छन् र राजस्व सरकारलाई आएको छ । जनताले काठदाउरा नजिकैबाट पाएका छन् । सहज रूपमा आपूर्ति भएको छ ।
अतिक्रमणका समस्या त ज्यूँका त्यूँ नै छ नि ?
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो । लामो समयदेखि प्रयास गर्दै जाँदा धेरै ठाउँमा अतिक्रमण हटाउन सफल त भएका छौं । अतिक्रमण खाली गराइएका क्षेत्रमा संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विवाद, स्रोतको कमीले गर्दा वृक्षारोपण हुन सकेको छैन । अहिले भूमि व्यवस्थाका लागि जुन आयोग बनेको छ नि, त्यो आयोगले नेपालभरि अतिक्रमण बढाउन टेवा पु¥याएको छ । सुकुम्बासी जुन जहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई त्यहीं जग्गा दिने भन्ने छ । यसले गर्दा झन् विवाद बढ्ने देखिन्छ । हटाउने कोसिस गर्दै छौं । खाली भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने योजना छ ।
सुधारका योजना के छ ?
यो वर्षको आम्दानी अधिकतम तलब खुवाउन ठिक्क भयो । अर्को वर्षहरूमा हामीलाई वित्तीय अभाव पनि नहोला । हामीले रोपेको टिक र मसला दुवै वैज्ञानिक रूपमा राम्रो मुना पलाउने प्रजाति हुन् । काटेपछि त्यहाँ रोप्नु पर्दैन । जराबाट चारैतिर नयाँ बिरुवा निस्कन्छ । थुप्रै निस्कन्छ । बढीमा ३ वटा राखेर अरू हटाउनुपर्छ । २ पटक मसलाको बिरुवामा गरेका छौं । चरिचरणबाट बचाउनुपर्छ । पुराना साल र मिश्रित भएको ठाउँमा काटेर नयाँ बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोण गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यहाँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरू केके छन् ?
हामीसँग सुरक्षा दस्ताका रूपमा सशस्त्र सुरक्षा छैन । चोरी गर्ने गिरोह जुन छ । गाडी र हतिहार लिएर आउँछन् । हाम्रो आफ्नै सशस्त्र सुरक्षा बल छैन । जिम्मेवारी पूरा छ । जिम्मेवारी छ तर कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन डीएफओकहाँ जानुपर्छ । प्रदेशको डीएफओ प्रदेशको र परियोजना संघको छ । डीएफओको अधिकार क्षेत्रमा नै समस्या छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार छैन । यसकारण संघमा ल्याउने कि भन्ने छ । अहिले फिल्ड लेभलमा यो समस्या थपिएको छ । सोचेजतिको प्रगति गर्न सकिएको छैन । चोरी भएको काठ सःमिलले किनिदिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न विगतमा सशक्त प्रहरीलाई दिने भन्ने थियो सुरक्षाको जिम्मेवारी, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अलिकति फरक प्रसंग, यहाँ समितिको अध्यक्ष मात्रै नभएर मधेसी समाजमा हुर्कनुभएको महिला पनि हुनुहुन्छ, नेपालकै पहिलो महिला अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँले अरूले भन्दा धेरै चुनौती भोग्नुभयो होला नि ?
यो प्रश्न सान्दर्भिक लाग्यो । अरूको जस्तो मैले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको पनि थिएन । मेरो क्याम्पस र कार्यक्षेत्र गाउँभन्दा बाहिर नै रह्यो । सोचाइको द्वन्द्व भए पनि सहनु परेन । पहिलो महिला वन अधिकृत भएर तराई सामुदायिक वन विकास आयोजना, महोत्तरीमा काम गर्न जाँदा हेर्न आउँथे, मान्छेहरू । कसरी कुरा गर्छ भन्ने अवस्था थियो । वीरगन्जको जिल्ला वन पञ्चायत सचिवालय वन शाखामा थियो त्यति बेला । गस्ती जान्थें पुरुषसरह । सुरुसुरुमा कसरी काम गर्न सक्छ र महिला भएर भन्ने भेटिए पनि काम गर्दै जाँदा पुरुषसरह काम गर्ने रहेछ भनेर प्रमाणित गराएँ ।
त्यो बेलामा महिला वन क्षेत्रमा आउनु भनेको त एकदम चुनौती थियो । आफ्नो क्षमता देखाउन पनि पटक–पटक अग्नि परीक्षा दिएर सावित गर्नुपर्ने रहेछ । कतिपय बेलामा सिकाइको क्रममा पुरुष साथीहरूको तुलनामा काम गर्न आउँछ कि आउँदैन ? काम बिगार्छ कि भन्ने शंकाचाहिँ भएको सुनिन्छ । तर, सक्षम भएपछि हट्दै जाने रहेछ, यी समस्याहरू पनि ।
यहाँ काम गर्दै जाँदा यो समितिको समग्र विकासका लागि १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौं, तर पर्याप्त स्रोतसाधन नै छैन । स्रोतसाधनको अभावमा योजना बनाएर मात्रै पनि हुन्न । कार्यान्वयन नभएसम्म राम्रो हुँदैन । २ सय जना दरबन्दी छ । ९२ जना कार्यरत हुनुहुन्छ । प्राविधिक कर्मचारी र सर्वेक्षक छैन । सुरक्षाका लागि खटिने दैनिक ज्यालादारीमा भएकाले श्रम ऐनअनु्सार सेवा सुविधा दिनका लागि अप्ठेरो पनि छ । अन्य स्रोतको कमी छ । हामीकहाँ चोरी हुन्छ । चोरीनिकासी, अतिक्रमण नियन्त्रण हुनसकेको छैन ।